Sweet Melody in the Rain: August 2009
- You can track the log by archiving in the EVENT LOG. You can also log to determine as unauthorized resource isaconcern.
- It allows to control the size of the log to specify the action that it takes whenalog becomes full.
- First of all, you need to plan to manage the auditing log.
- which type of events you want to audit
- whether to audit success or failure
- record unauthorized access to the files
- track the printer usage
- track procedure to prevent data theft
- track unauthorized access to Active Directory objects
- Whatever the Windows can manage the audit log, the programming (vb.net 2005, vb.net 2008) - I don't know how about other languages - also can do it as Window (any verison). It is very useful and easy.. TRY IT.
I am with 3D
- 3D အကြောင်းလာမမေးနဲ့ ။ ဘာမှမသိဘူး။ ဆွဲဖို့ မပြောနဲ့ ။ ကြည့်တောင်မကြည့်တတ်ဘူး။ ကြည့်ရင်း
နဲ့ ခေါင်းမူးလာရော။ ခံစားတတ်တဲ့လူတွေကို တကယ်လေးစားတယ်။
- ဆွဲခိုင်းပြီဆို လို့ ကတော့ ပြီးရောပဲ။ front view ကို top view လို့ မြင်လိုမြင်နဲ့ ။ သင်ဖြစ်အောင်သင်ခဲ့ရတဲ့ autocad (basic) မှာတောင် စာမေးပွဲကျတယ် ဆိုတော့ ဘယ်လောက်ထိ ညံ့မလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။
- တစ်ခုပဲသိတယ်။ ကြည့်ရတာ တော်တော်လှတယ်။ တကယ်လို့ တောင်ထင်ရတယ်။
- http://www.cgnewspaper.com/en/cgezine/tutorials/3d-concepts-chapter1-en.html?page=1 အဲဒီမှာ သွားကြည့်ကြည့်လေ။ အများကြီးပဲ။ တမေ့တမော ခံစားလို့ ကောင်းတယ်။ :P
-4နှစ်လောက်ရှိပြီ။ မပြန်ဖြစ်တာ။ ခုမှပဲပြန်ဖြစ်တော့တယ်။ ၂ ညအိပ်၊ ၃ ရက်ခရီးဆိုပါတော့။ ဒီတော့ကာ ဘယ်မှလည်းမရောက်ဖြစ်ဘူးရယ်။
- ခွင့်လေးရတုန်းပြန်ပါတယ် ဆိုနေမှ ချင်းမိုင်ရောက်သွားသေးတယ်။ ရန်ကုန်ကိုအသွား လေယာဉ်ပျံက (ရန်ကုန်ကိုရောက်နေပါပြီဆိုနေမှ) အောက်ကို မဆင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့ ချင်းမိုင်ကိုသွား အဲဒီမှာ ၂နာရီလောက်နား ပြီးမှ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာဆိုတော့ကာ ၉နာရီခွဲဆိုက်ရမယ့်လေယာဉ်ဆိုတာ ၁နာရီခွဲမှပဲ ဆိုက်တော့တယ်။
- wednesday night လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ thursday မနက်အစောကြီး flight
နဲ့ သွားတာ ချင်းမိုင်ရောက်တာ နဲ့thursday နေ့ တ၀က်ကကုန်ပြီ။
- ကလေးအနေနဲ့ ကတော့ ပထမဆုံးလေယာဉ်စီးရတဲ့ဒဏ်ရော၊ အကြာကြီးပဲ စီးလိုက်ရတာလည်း ပါတာပေါ့။ ငိုလည်းငို၊ အန်လည်းအန်နဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးလုံးကို သိပါလေရော။ :(
- singapore ပြန်ရောက်တော့ ကလေးကအေးဆေးပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ခုမှ ပြန်ရောက် တယ်လို့ အောက်မေ့တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ပြီးတော့ပြောသေးတယ်။ singapore ကို ရောက်ပါပြီရှင်တဲ့။
- သူ့ ခမျာ ရန်ကုန်ရောက်တော့မှ
အပြင်မှာ မှောင်မှောင်မည်းမည်းကြီးတွေ့ ရင် အံ့သြလို့ ။